Isimada Puntland oo Dalbaday in Qaxtootiga Yemen ka Imaanaya loo Gurmado – Radio Daljir
Abriil 13, 2015 2:36 b 0
Isniin, Abriil 13, 2015 (Daljir) — Isimada Puntland ayaa shacabka ugu baaqay in ay taageero iyo gargaar u fidiyaan dadka qaxootiga ah ee ka soo firxanaya dagaalada iyo duqaymaha ka soconaya dalka Yemen ee soo gaaraya gudaha deegaanada Puntlanad.
Islaan Ciise Islaan Maxamed Islaan Muuse oo hadal ka jeediyey Munaasabad xaflad soo dhaweyn ah oo Magaalada Garoowe loogu sameeyey Raysl Wasaaraha Soomaaliya iyo wafdigii la socday ayaa ugu baaqay bulshada ku dhaqan deenada Puntland in ay gacan siiyaan walaalohooda ka soo laabanay dalka Yemen ee ka soo baxsanayey qalalaasaha ka taagan dalkaasi.
”waxaa loo baahanayahay in dadka ku soo qaxaya puntland ha u dhasheen Gobalada Puntland ama gobalada kale ee dalka in loo gargaaro oo gacan loo fidiyo,la soo dhaweeyo,la gacan qabto,la dajiyo”ayuu yiri Islaan Ciise Islaan Maxamed.
Puntland ayaa waxaa soo gaaray qaxooti farabadan oo ka soo laabanaya dalka yemen oo ay ka socdaan dagaalo u dhexeeya xuutiyiinta iyo ciidamada dowladda yemen oo barbar socdaan duqaymaha xulafada uu sucuudigu hogaaminayo kuwaas oo saamayn xoogan ku yeeshay qaxootiga soomaalida ee mudada ku sugnaa dalkaasi.
dhawaan ayey ahayd Markii Wasiirka Arimaha Gudaha Dowladdaha Hoose iyo Horumarinta reer miyiga puntland uu ka codsaday hay,adaha caalamiga ah iyo beesha caalamka in gargaar loo fidiyo qaxootiga soo gaaraya Puntland.